❤️ Otu esi enweta nlele Tik Tok - Ntuziaka na -enye nkọwa - Winches Club
Inweta echiche Tik Tok dị mfe karịa ka ị nwere ike iche, enwerekwa ọtụtụ ụzọ isi mee ya.. Ka anyị leba anya n'ụzọ dị iche iche iji na -anakọta nyocha Tik Tok ma chọpụta ụzọ kacha mma iji bulie nyocha Tik Tok gị.
Mụta & agrave; Mara ndị na -ege gị ntị
Otu n'ime ihe a kacha mara amara ma bụrụkwa ihe doro anya nke ụfọdụ ndị okike jiri kpọrọ ihe bụ ndị na-ege ha ntị.. Ndị na -ege gị ntị bụ isi echiche na ntinye aka ị ga -enweta. akaụntụ gị. Ya mere, ọ dị mkpa na ọ dịkarịa ala ka ị mara onwe gị na ndị na -ege gị ntị ka ị nwee ike imeghari ọdịnaya gị na agrave; ihe ga -atụ anya na agrave; lee na ọwa Tik Tok gị. Ọ gaghị adị mfe ịmara ndị na -ege gị ntị. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji mata ndị na -ege gị ntị nke ọma. Otu n'ime ụzọ kachasị mma isi mee nke a bụ ịme ntuli aka na ntuli aka n'ịntanetị. Ha nwere ike nye gị ihe ngosi ka mma. nke inweta ọdịnaya gị yana ihe nwere ike gbanwee; na agrave; ọdịnihu iji mee ka ọdịnaya bụrụ ihe na -adọrọ mmasị nye ndị na -ege ntị zuru ụwa ọnụ.
Na mgbakwunye na nyocha ndị otu yana Q&A na ndị na -akwado gị, Nyocha Tik Tok bụ ụzọ ọzọ dị mma iji tụọ arụmọrụ gị niile. Inwale arụmọrụ gị n'ozuzu ya dị mkpa, n'ihi na ọ bụrụ na ịnweghị, akaụntụ gị nwere ike ọ gaghị adọrọ mmasị ma ọ nwere ike ọ gaghị enwe ọtụtụ mmadụ na -akpọtụrụ ya n'ọdịnihu dị nso.
Lelee post a na Instagram
Post nke TikTok kesara (@tiktok) na Jul 7, 2020 na 12:00pm PDT
Chọta Echiche Ọdịnaya Ọhụrụ
Na mgbakwunye na ịmata ndị na -ege gị ntị, ọ dịkwa mkpa iwepụta echiche ọdịnaya ọhụrụ. Ịchọta echiche ọdịnaya ọhụrụ bụ nnukwu ụzọ iji mee ka ọwa Tik Tok gị bụrụ ihe na -atọ ụtọ yana, ya mere, ịgba ndị mmadụ ume na agrave; gaa leta ya. Ọ dị mkpa icheta na mgbe ị na -achọ echiche ọdịnaya ọhụrụ, i kwesịghị idetuo otu ozugbo. Gbalịa mepụta ọdịnaya nke gị dabere na usoro nje ma ọ bụ skit, n'ụzọ na agrave; adịghị nnọọ tinye & agrave; ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ na -ebipụta otu ọdịnaya ọdịnaya dabere na ihe na -eme ma ọ bụ nje. Imegharị ma ọ bụ depụtaghachi ọdịnaya nwere ike ibute mmachibido ma ọ bụ igbochi akaụntụ gị ruo n'ókè ụfọdụ ma ọ bụrụ na ekpebisie ike na ọdịnaya gị abụghị nke mbụ.
Mgbe ị nọ na -achọ mkpali maka echiche ọdịnaya ọhụrụ, kedu ihe ị ga -ekwu maka ya na agrave; ndị enyi gị ? Ndị enyi gị nwere ike bụrụ nnukwu ihe mkpali ma ọ bụ ozi ma ọ bụrụ na ị na -achọ & agrave; mepụta Tik Tok na -atọ ụtọ ma na -adọrọ mmasị. N'elu nke ahụ, gbalịa ịlele ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ. E wezụga, Inyocha igwe mgbasa ozi ndị ọzọ ga -enye gị nyocha nke ọma ụdị ọdịnaya ị nwere ike chọọ imepụta n'ọdịnihu dị nso yana ka ekwesịrị isi bipụta ya;. Ịchọta echiche ọdịnaya ọhụrụ maka ọtụtụ ndị mmadụ na Tik Tok nwere ike bụrụ otu n'ime akụkụ kacha sie ike na ngwa ahụ.. Nke a bụ n'ihi na enwere ọtụtụ mmadụ na -eji ngwa ahụ na ọ nwere ike isi ike ịbụ ihe pụrụ iche na nke mbụ ngwa ngwa, opekata mpe, agrave; nnukwu nha.
Tik Tok bụ ikpo okwu ohuru na -agbagha ndị ọrụ ya imepụta ọdịnaya ọhụrụ na -etinye aka na -erite uru obodo. Ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịmepụta ọdịnaya nke gị, Idebe ya na ide ya bụ ụzọ dị mma iji chekwaa echiche gị wee dee ha n'akwụkwọ. Nke a na -enye gị ohere ka mma nke ịmepụta ọdịnaya na -adọrọ mmasị.
Nọrọ Ịma & oacute;
Otu n'ime ụzọ kacha mma, nke kacha agbanwe agbanwe na ịrụ ọrụ nke ọma, inweta echiche ndị ọzọ na Tik Tok bụ ịmara ikpo okwu gị. Ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị na -eme ka anyị mata akụkọ na ihe ndị ọhụrụ. ụbọchị, ọ kachasị ma ọ bụrụ na emee mgbanwe dị mkpa ngwa ma ọ bụ ọ bụrụ mgbanwe nwere ike imetụta akaụntụ gị. Ọ dị mkpa ịgbaso Tik Tok na nzọ niile; ụbọchị ọ natara, n'ihi na nke a na -ekwe gị nkwa nzọ na agrave; ụbọchị ụbọchị. Ọ bụrụ na ịnweghị mmelite na mmelite & agrave; ụbọchị yana ndị okike, ị nwere ike ịhụ obere mmekọrịta na akaụntụ Tik Tok gị. Nke a nwere ike ibute mmụba dị ala n'etiti ntaramahụhụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị naghị agbaso ntuziaka maka Tik Tok.
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga -esi na -agwa gị. ya na Tik Tok. Otu n'ime ụzọ kachasị mfe na nke na-ewe oge bụ ịdenye aha na agrave; akwụkwọ akụkọ. Akwụkwọ akụkọ nwere ihe azụmaahịa yana ozi na mmelite. ụbọchị na -adịghị ahụkebe… E wezụga, nke a na -enye gị ohere ịghọta nke ọma ka Tik Tok na -adọta ọtụtụ mmadụ kwa afọ. Na mgbakwunye na ịdịgide na -eme ihe omume Tik Tok, ị nwekwara ike ịtụle ime onwe gị ama na Tik Tok. Ka emechara, kpakpando mgbasa ozi na -elekọta mmadụ na Tik Tok rụrụ ezigbo ego ekele nke a na agrave; mgbasa ozi na nkwado mgbe imepe akaụntụ ma ọ bụ ndekọ zuru ezu, ma ọ bụ mgbe otu vidiyo ha agagharịla.
Post nke TikTok kesara (@tiktok) na Maachị 6, 2020 na 3:00nke PST
Mepụta vidiyo nkuzi pụrụ iche
Ịme vidiyo nkuzi izizi dị ezigbo mkpa. N'ezie, vidiyo na -enye nkọwa yikarịrị ka ọ ga -enye nsonaazụ na -atọ ụtọ ma mee ka ihe niile dịrị gị mfe. niile. Mgbe ị na -eche banyere vidiyo nweta, na agrave; oge ugbu a, nleta ozi na -adịkarị ụkọ. Nke a kpebiri; eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ vidiyo dị na Tik Tok dabere na ihe nkiri vidiyo egwu egwu. Ka o sina dị, ọnụ ọgụgụ ngwa na -egosiwanye na onye ọrụ bụ otu igwe mmadụ.
Ọmụmaatụ nke vidiyo nkuzi pụrụ iche ị nwere ike iwepụta bụ ime ka-esi eduzi maka egwuregwu vidiyo. Ọmụmaatụ, ị nwere ike igosi ihe pụrụ iche na egwuregwu ahụ maka sekọnd ole na ole. Ọ bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị na ọdịnaya gị yana ihe na -agbasa. na ọwa gị n'ozuzu.
N'ikpeazụ, banyere ọdịnaya nke Tik Tok, ọ dị mkpa icheta na ndị mmadụ chọrọ ngwa ngwa, ọdịnaya nke na -akụziri ha ihe ma ọ bụ nwee uru ntụrụndụ. Ntụrụndụ bụ ụzọ ọzọ dị mma iji mee ka ọdịnaya Tik Tok gị baa ụba, n'agbanyeghị na ekwuola nke ahụ, ị kwesịrị ịmara na vidiyo na ọdịnaya ọdịnaya bụ nnukwu ụzọ iji nweta echiche ndị ọzọ na Tik Tok, n'ihi na nke a bụ mpaghara emebeghị n'ezie. nyochawa Ndị na -eme ihe nkiri kacha ama ama na Tik Tok.
Mee ka vidiyo gị bụrụ ihe ọchị
Tik Tok bụ ebe ọmụmụ nke ọdịnaya pụrụ iche, na -akpa ọchị na mmetụta uche. Ọ dị mkpa ịhapụ otu oge wee mee ụfọdụ vidiyo gị ọchị.. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ga -eme atụmatụ nke ọma iji mee ka vidiyo gị bụrụ ihe ọchị. Nwaa ịgbakwunye ụfọdụ nkọwa okwu na -atọ ọchị na ya. vidiyo gị, yana egwu kwesịrị ekwesị. Ị nwekwara ike ịmepụta obere skit ma ọ bụ skit nke gụnyere ihe dị iche iche. ihe na echiche. Ịbụ ọchị anaghị ewe oke echiche. Ụzọ dị mfe iji mepụta vidiyo na -atọ ọchị ga -abụ igwu egwu. enyi. Obere ihe egwuregwu ụmụaka na Tik Tok na -ewu ewu. Dị ka ndụmọdụ igwefoto na usoro igwefoto.
Na -ekwu maka Tik Tok na agrave; ụfọdụ ndị enyi gị. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ nwere echiche dị iche iche gbasara ụdị Tik Tok dị iche iche na ihe enwere ike were dị ka eziokwu. dị ka ihe na -atọ ọchị na ngwa. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ka ị kwuo ma ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume & agrave; site n'aka ndị ọzọ ị mara iji nweta nzaghachi na echiche na ụfọdụ ọdịnaya ị na -emepụta yana enwere ike were ya dị ka ihe ọchị ma ọ bụ na ọ bụghị.
Mgbe ụfọdụ, ụfọdụ vidiyo na -atọ ọchị kere bido site na echiche dị mfe. Ya mere, ntakịrị atụmatụ na imepụta ihe nwere ike inyere gị aka na agrave; mepụta ọtụtụ echiche na mgbanwe na Tik Tok. Mgbe ị na -achọ & agrave; mee ka vidiyo gị dị ụtọ, ọ dị mkpa ka ị mara ndị na -ege ntị ị na -ezubere iche, n'ihi na ịmara ndị na -ege gị ntị pụtara na ị nwere ike lekwasị anya ngalaba ndị akọwapụtara.
Edemede gara agaAkụkọ gbasara akpaaka Instagram
Akụkọ na-esoteShoppingzụ ahịa IGTV dị ugbu a na Instagram